Ukusakazwa kwamahhala ku-inthanethi
Insiza yokusakaza yezingqungquthela eziku-inthanethi, amakilasi aphezulu, okokufundisa kanye nama-webinar
Thola imali ngemifudlana
Uma izethameli zithanda ukusakazwa kwakho, zizokunikeza amathiphu ongawahoxisa.
Abasebenzisi abangaphezu kuka-500,000
Ngenxa yezithameli eziningi epulatifomu yethu, uzokwazi ukuthola ababhalisile nabalandeli ngaphandle kwezindleko ezengeziwe zokumaketha.
Ukusakazwa ku-inthanethi naku-YouTube
Ngaphezu kwalokho, ukusakaza bukhoma, ungasakaza futhi iziqeshana ze-YouTube ezirekhodwe ngaphambilini.
Ingxoxo yevidiyo ne-TV exhumanayo
Usebenzisa ingxoxo yethu yevidiyo, uzokwazi ukuxhumana nezithameli zakho ngenkathi usakaza, uphendula imibuzo yabo noma ufunde imibono yabo. Ungabamba iqhaza engqungqutheleni yevidiyo nababukeli bakho.
Uhlelo lokudlulisela “luhole futhi uthole”
Uma umema ababukeli abasuka kumasayithi akho, uzohlala uthola ukusikwa okungu-30% kunani lezinkokhelo zabo zesikhathi esizayo noma ngabe ungasasakazeli nathi. Unedeshibhodi eyenziwe ngezifiso ezokusiza ukuthi uhlole uhlu lwezimemo nemisebenzi yazo.
Uma usakaza njalo futhi ngokungaguquguquki, ungahle ubeke uhlelo lwababukeli bakho ukuze bazi ukuthi bangakulindela nini ukuvela kwakho okulandelayo.
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zezibukeli
Ungahlinzeka ngezinsizakalo zokubonisana ezikhokhelwayo, ube nezingoma ezi-odwa, futhi uklonyeliswe ngokudutshulwa nokubingelelwa bukhoma. Uzonikezwa isikhombimsebenzisi esihle ngale njongo
Ukuqoshwa kwamahhala kwemifudlana yakho yevidiyo
Izibukeli zakho zizokwazi ukubona ukurekhodwa kokusakazwa kwakho ekuphakelweni kwazo kwezindaba. Ngaphezu kwalokho, ukwenza imidwebo ebukhoma. Lokhu kuzokhulisa inani lokubukwa kaningi. Futhi, kulula ukulanda amavidyo evidiyo ekusakazweni kwakho ukuze uwulayishe esiteshini sakho se-YouTube noma ukuvele usule.